PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - Abeneme ngokwenzeka ecaleni loweSACP
Abeneme ngokwenzeka ecaleni loweSACP
Isolezwe - 2018-04-16 - IZINDABA - BONISWA MOHALE
AWUNEME neze umndeni wesishoshovu seSACP, uNksz Nontsikelelo Blose, ngokuthi uyedwa umuntu olahlwe yicala lokumbulala nelokuzama ukubulala yize bekuboshwe abasolwa abahlanu.
Indodakazi kaNksz Blose, uNksz Nomfundo Blose (21) ithe kwaboshwa abantu abahlanu ababebhekene necala lokubulala nelokuzama ukubulala.
“Ngiphatheke kabi ukuthi uyedwa umuntu olahlwe yicala yize kwakuboshwe abahlanu. Bengizitshela ukuthi bonke ubufakazi buqoqwe ngendlela efanele futhi bonke abasolwa bazotholwa benecala yize kungesibo bonke abazotholwa necala lokubulala kodwa kunokuthile okubahlanganisa nokubulawa kukamama,” kusho uNksz Blose.
Uthe kwakuboshwe oMnuz Bonginkosi Hlengwa, Sthembiso Mnguni, Lindokuhle Basi, Khehla Shozi noLungisani Lungu bonke babeziqhathulula ecaleni.
NgoLwesihlanu iMantshi uNkk Sharon Marks ithole uShozi enecala lokubulala nelokuzama ukubulala.
Ithe kufanele abuye enkantolo ngoMeyi 31 azogwetshwa.
UNksz Blose uthe uzokhuluma nobuholi beSACP ngokungenami kwakhe ukuze kuthathwe izinyathelo ezithile.
Uthe impilo inzima selokhu kwabulawa unina ngoba nguye obhekele izingane zakubo ezintathu okuhlanganisa nomagcino oneminyaka emihlanu.
“Angisebenzi, ngisafunda, kufanele ngizinakelele mina, nezingane zasekhaya. Ngisebenzisa imali engangiyithola ngesikhathi ngisacashile njengofakazi woMbuso. Bengitshela ugogo ukuthi ngicabanga ukuyeka isikole ngifune amatoho ngoba nemali iyaphela kodwa wathi angiqhubeke nesikole sizobona ukuthi senzenjani. Kunzima njengoba umama engasekho,” kusho uNksz Blose.
IPhini likaNobhala weYoung Communist League (YCL) kuzwelonke, uMnuz Isaac Luthuli, lithe bayajabula ukuthi umuntu owabulala utholakele futhi walahlwa yicala kodwa abaneme ukuthi ngeke athole udilikajele.
“Imantshi ithe abukho ubufakazi obuveza ukuthi uNksz Blose wabulawa ngenxa yokuthi wayewufakazi obalulekile ecaleni elithinta isihlobo sikamsolwa olahlwe yicala, ngaleyo ndlela ngeke awuthole udilikajele. Asineme nokuthi alikho icala elavulwa ngezibhamu ezingekho emthethweni nokuphula umthetho. Abasolwa abadedeliwe bakhohlisa inkantolo siyakhala ngalokhu,” kusho uLuthuli.
Uthe bayasola ukuthi kunokungenelela kosopolitiki kulolu daba.
Uphinde wakhala ngobuholi be-ANC athe selokhu kwabulawa uNksz Blose, abukaze buvakashele umndeni wakhe nokuyobona izingane esezisele zodwa.
“Ukuthula kwe-ANC kuyamangaza ngoba kusho ukuthi ayiboni ukuthi kukhona okonakele ngokubulawa kwabantu eNtshangwe. Sifisa abaholi be-ANC bafunde ukuzwelana nabantu njengoMama uWinnie MadikizelaMandela owayehambela abantu uma bevelelwe yisigameko esibi,” kusho uLuthuli.
UNksz Zinto Cele okhulumela i-ANC eThekwini, uthe bazophawula uma inkantolo isiphothule umsebenzi wayo, okwamanje ucela kudedelwe inkantolo.
UNKSZ Nomfundo Blose (ofake izibuko) uthi ufuna ubulungiswa ecaleni lokubulawa kukanina. Lapha wathathwa esemngcwabeni kanina ngo-2016 nezingane zakubo nesihlobo